TOP NEWS: Muxuu kusoo Dhamaaday Kulan Albaabada ay u xiranyihiin oo Galkacyo ku dhexmaray Madaxweyne Guulled iyo Odayaasha Dhaqanka Gobolka Mudug????+Sawirro – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Muxuu kusoo Dhamaaday Kulan Albaabada ay u xiranyihiin oo Galkacyo ku dhexmaray Madaxweyne Guulled iyo Odayaasha Dhaqanka Gobolka Mudug????+Sawirro
by Tifaftiraha K24 12th November 2016 043
Madaxweynaha Maamulka Galmudug oo Galkacyo ku sugan ayaa Waxa uu Kulamo la qaatay odayaasha Gobolka Mudug ee Dowlad Goboleedka Galmudug.
Kulanka oo Mudo soconayay ayaa la sheegay in uu ahaa Mid Albaabada u xidhanyihiin oo Saxaafada ay Dibad joog ka aheyd iyadoona Odayaasha Gobolka Mudug ay Madaxweyne Guulled uga warameen Xaalada Galkacyo.
C/Kariim Guulled ayaa Odayaasha Gobolka Uga Mahad Celiyay sida ay Isu dul istaageen in Galkacyo Nabad Laguw ada Noolaado iyo dadaalka ay Arintaasi ku Bixiyeen Waxaana Madaxweynuhu uu u balan qaday Odayaasha in Heshiiska uu la geli doono Dhigiisa Puntland uu Noqon doono mid ay Iyaga ku qancaan oo wax dhaliil ah aysan ka Imaan Doonin.
Madaxda Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa maanta lagu wadaa inay ka wada hadlaan sidii xal loogu heli lahaa xiisadda colaadeed ee magaalada Gaalkacyo, isla markaana ay dhameystiraan heshiiskii ay ku wada gaareen dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Madaxweynayaasha Dowlad goboleedka Puntland iyo Galmudug oo shalay gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa halkaasi kulamo gaar gaar ah la yeeshay Nabadoonada Gobolka, waxaana kulamadaasi ay ahaayeen kuwa la isku xog wareysaneyay.
xaalada magaalada gaalkacyo ayaa saaka dagan, waxaana kulanka maanta ay Gaalkacyo ku yeelanayaan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed, goob joog ka noqon doona Madax ka tirsan Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka u jooda dalka.
Halkaan Hoose ka Daawo Sawirrada Kulanka:
DEG DEG: Ciidamo Gadoodsan oo Jubbaland ka tirsan ayaa Goordhaw la Wareegay Xarunta ay ka socoto Doorashada Aqalka Hoose iyo Jawiga oo aad u Kacsan
admin 8th January 2017 8th January 2017
DEGDEG: Kooxda Alshabaab oo sheegatay dil loo geystay Sargaal ka tirsan Iyo Qarax kadhacay.